I-Motorola Xoom isigcinele ezinye iimfihlo, zifumanise | I-Androidsis
Kubonakala kucacile ukuba zombini i-Motorola kunye noGoogle bafuna ukumiliselwa Ithebhulethi yeXoom eneHoneyComb cinga inguquko malunga nezi zixhobo kwaye iyimodeli wonke umntu ayijonga njengomzekelo onokuwulandela. Ewe ngayo iya kuza nenguqulelo entsha kunye nehlaziyiweyo ye-Android, elungiselelwe ukusetyenziswa kolu hlobo lwesiphelo (nangona kungengenxa yazo kuphela) kwaye le nkqubo kufuneka ibekwe kwinto elungileyo kwaye itsala umdla.
Ukubalula esele sidibene nayo kwinkcazo-ntetho yayo, enje nge-10,1-intshi yesikrini esinesisombululo seepikseli eziyi-1280 × 800 ezibandakanya uxinzelelo lwepikseli nge-intshi eyi-160, Iprosesa yeNvidia Tegra 2 ukuya kwi-1 Ghz Isantya sikhatshwa yi-1 GB yememori yohlobo lwe-RAM kunye ne-32 GB yokugcinwa kwangaphakathi okwandiswa ngamakhadi amancinci e-SDHC. Ngoku kufuneka songeze isivamvo esitsha okanye icandelo elizakwenza iintlobo zezicelo kunye nokusetyenziswa okunokuthi kunikwe le cwecwe kwanda kakhulu, IMotorola Xoom ibandakanya ibarometer.
Le barometer ijoyina uluhlu olude lweenzwa isixhobo esinaso njengesantya, isivamvo sokukhanya, isivamvo sokukhanya okukufutshane, imagnetometer, ikhampasi yedijithali kunye negyroscope. Nabani na ofunda oku kwaye engengobuchwephesha bobuchwephesha uyakholelwa ukuba sithetha ngenqwelomoya okanye isphekepheke, kodwa itekhnoloji iqhubela phambili ngokuxhuma kunye nemida kwaye yintoni eyinyani yesayensi kwiminyaka embalwa edlulileyo ngoku yimihla ngemihla.
Ngezi zivamvo zintsha, izicelo ezenza uqikelelo lwemozulu ziya kuba zichaneke ngakumbi kwaye zibengingqi. Ngokwesiqhelo zonke izicelo zisebenzisa idatha eqokelelwa kwizikhululo zolwazi ezisembindini ezihlala zibekwe ziikhilomitha ukusuka apho sikhona. Ngale sensor intsha, nangona ayisiyiyo kuphela into echanekileyo yokukwazi ukwenza imodeli yokuxela kwangaphambili, iya kunceda ukuyenza ichaneke ngakumbi kwindawo esikuyo.
IMotorola ayifuni ukungahoyi nantoni na kule cwecwe kwaye kuyaziwa ukuba uninzi lwethu luthanda ukwenza izixhobo zakho zenziwe ngandlela thile, iMotorola Xoom iyakuthengiswa ngemibala emine kodwa ukuba iya kuba yintoni ayichazwanga.
UGoogle kunye neMotorola bafuna ukumakisha indlela eya phambili kwabanye abavelisi kwaye nangona kukhuseleko olupheleleyo kwiinyanga ezimbalwa ezi zixhobo zizakuphelelwa lixesha, namhlanje sinokujonga Motorola Xoom njengelona cwecwe lipheleleyo likhoyo.
IMotorola iyazi kakuhle into ekulindelwe ukuba iyanyusa kwaye uqikelelo lwentengiso olukhulu, idatha yakutshanje eqokelelweyo ithi balindele ukubeka intengiso kule Q1 yokuqala ngeenxa zonke iiyunithi ezingama-800.000, ezinokufikelela kwisigidi esinye ukuba kunyanzelekile. Nangona zibonakala zininzi, sinokuzithelekisa nesigidi seGlass Tab ezazithengiswe kwinyanga yokuqala yobomi okanye i-7 yezigidi ze-iPad ekulindeleke ukuba zithengiswe kule kota yokuqala.
Ngokungafaniyo nemveliso yeCupertino, nje ukuba iHoneyComb ikhutshwe kwi-Android, le nkqubo yokusebenza inokuzonwabisa ngaphezulu kwesinye isiphelo, ngoko ke ukhuphiswano luya kuba yimbangi enzima kubo bonke abavelisi. Ndiyathemba ukuba oku kuyakugcina amaxabiso ekubeni agqithise.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Ezinye izixhobo » IMotorola Xoom igcine ezinye iimfihlo kuthi, zifumanise
Okwangoku ixabiso alibonakali lihle kakhulu. Ngaphezulu kwama-800 euros.
RT @iguanahosting Motorola XOOM Ixabiso lethebhulethi lityhiliwe http://bit.ly/gRLPt9
Isivamvo sakufutshane akuthethi tine ubuncinane koko ithi kumfanekiso iqhotyoshelweyo
Phendula ku Spiderbezno
kunene, ndiye ndadideka. Enkosi
Kwithebhulethi akuyomfuneko njengefowuni kuba awuzukuyibeka endlebeni
I-barometer inomdla kodwa ngokobuqu kum ayinamsebenzi.
Ngendlela ... Ndiyalithanda igama lakho, liyandinika ukuba sithanda abalinganiswa abahlekisayo same
Phendula kwi sansa
Njengoko benditshilo, into ye-barometer ipholile kakhulu, kodwa ayongezi kakhulu ekusebenziseni ifowuni ngendlela eqhelekileyo. Ngaphandle kokuba isicelo se-barometer sinokuyisebenzisa njenge-altimeter. Ingasetyenziswa kwezinye izicelo okanye ngokudibeneyo neGPS.
Mhlawumbi uGoogle usebenza ekusebenziseni iNavigon okanye iMaphu ikwathathela ingqalelo indawo ekuphakameni (ukwazi ukuba sisentabeni okanye ngaphezulu kwesakhiwo, okanye kwitonela okanye ngaphezulu kwayo) ... ukuze ibe yinto enomdla.
IXoon ijongeka intle kakhulu, kodwa ngokobuqu ndiyathemba ukuba baya kukhupha iimodeli ezifanayo ezisi-7.
Ndiyayithanda le tablet kodwa ndinombuzo okoko yathiwa thaca kwaye ayicacanga kum. Unayo iGPS? Akukho ndawo ithi ngokucacileyo inayo ...
Akukho ndawo xa ithetha ngeempawu kukhankanyiwe i-GPS, kwaye kwiwebhusayithi esemthethweni ye-motorola yeXoom ayitsho nto ...
Zonke iitheminali ezineNtengiso ye-Android edityaniswe ngokusesikweni kufuneka ibeneGPS, yenye yeemfuno zesatifikethi esinyanzelwa nguGoogle kubavelisi, njengoko uya kuqonda, ithebhulethi yakho kufuneka iyithwale. Iimpawu zethebhulethi zilapha, kwiphepha olibekayo azikho. Greet Umbuliso
Unyanisile, nangona kungacacanga kum ukuba uthetha ukuthini nge-E-Compass, kunye neGPS ngaxeshanye. Ukuba ayithethi nto malunga ne-A-GPS, isenza indawo esekwe kunxibelelwano lwe-Intanethi hayi kwisamkeli sendabuko seGPS, ekuya kuthi kungabikho ncinci kuyo.
Andazi, andonelisekanga kwaphela yile ndawo, kuba kubonakala kuyinto engaqhelekanga kum ukuba kwiindawo ezimbalwa kakhulu kusithiwa le thebhulethi ine-GPS.
Ngaphandle koko ndiyayithanda ithebhulethi. Imibuliso.
Mhlawumbi, i-GPS kodwa ayisiyiyo i-A-GPS (incediswa yi-Intanethi) ukuba ayisiyi-sensor ezizimeleyo ngaphandle kwendleko kumsebenzisi, njengaleyo yeemoto zegps kunye ne-Chinese gps.
IsiJamani sasePedemonte sitsho
Wonke umntu .. ukuba unayo i-GPS kwaye simahla… umthombo .. Ndibhala oku kwi-xoom xd yam
Phendula kwiJamani Pedemonte